musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Bulgari jewelry Zvitoro muParis zvakatsvaira kunze kwe10 mamirioni euros
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • France Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
€ 10 mamirioni-anokosha ezvishongo akabvutwa mu brazen Paris boutique heist
Uku kuba kweParis kwakaitika nguva dzemasikati neChipiri. Nepo mapurisa vasati vazivisa zviri pamutemo chitoro ichi, kuvapo kwemitemo inorema kwakaonekwa paBulgaria boutique, iyo yaive chinangwa chevapambi.
Makororo akarova chitoro cheBulgari chishongo pakati peParis.
€ 10 mamirioni-anokosha ezvishongo zvakabiwa masikati.
Mapurisa eFrance akasunga vasungwa vaviri mushure mekumhanya-mhanya.
Chitoro chepamusoro cheParis chakashongedzwa nemakororo nzvimbo Vendôme chakarohwa nemakororo uye fungidziro yekukwevera ye10 mamirioni ($ 11.8 mamirioni) muzvishongo zvakanzi zvakabiwa mukati mehusiku masikati heist.
Kubira kwakaitika nguva dzemasikati neChipiri. Nepo mapurisa vasati vazivisa zviri pamutemo chitoro ichi, kuvapo kwemitemo inorema kwakaonekwa pa Bulgari boutique, iyo yaive yakatarwa nemakororo.
Paris mapurisa abata vasungwa vaviri, uye kutsvaga kuri kuenderera mberi kune dzimwe mbavha.
Vasungwa vaviri vakasungwa pavakaedza kutiza mhosva iyi, mapurisa akadaro, vasina kupa rumwe ruzivo, asi mamwe mapurisa akataura kuti kuba kwacho kwakazomhanyisa, sezvo vanhu vacho vakaedza kutiza vachishandisa BMW mota uye maviri emota scooter.
Sekureva kwenhau dzemuno, mumwe mupurisa akakuvara zvishoma panguva yekumhanyisa, paakarohwa nemotokari, mumwe wevasungwa vakasungwa akapfurwa gumbo.
Chiverengero chisingazivikanwe chevasori vanoramba vari pakazara. Sekureva kwemishumo ivo vakakwanisa kutiza nekutakura kukuru kwezvinhu zvakabiwa zvine mutengo unofungidzirwa kutenderedza mamirioni gumi emadhora.
Chiitiko ichi ndechekupedzisira mune tambo yemhando yepamusoro yezvishongo heists mumuzinda weFrance muzhizha. Muna Chikunguru, gororo rine zvombo rakasimudza matombo anokosha nezvishongo masikati machena kubva pa Chaumet chitoro padyo neChamps-Elysées. Gororo pachiitiko ichocho rakasungwa pamwe chete newavakabatira nguva pfupi yapfuura, uye kupamba, kwakakosheswa mari ingangoita mamirioni matatu emadhora ($ 3 miriyoni), kwakawanikwa.
Mazuva mashoma chete mushure me Chaumet heist, makororo maviri akarova a Dinh Van chitoro, kuba mari inosvika mazana mana ezviuru zvemazana emazana emari, uye zvishongo zvine huwandu hunofungidzirwa hwe € 400,000 miriyoni ($ 2 mamirioni).